Mejupụtara nke ikuku ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụrụ na mbara ala tere aka ma ọ bụ nọrọ nso na Sun, ọ na-esiri ya ike inwe ikuku juru oke iji kwado ndụ. Otu nke gbara ụwa gburugburu, ụlọ anyị, bụ a oyi akwa gaseous onye kwe ka nke ahụ mee. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị ụwa ọzọ achọtaworo nke 'ga-etu ọnụ' maka inwe ndị bi n'ime ya.
Ma, Gini bu ihe mejuputara uwa na ihe kpatara ya ji di nkpa?
1 Ngwakọta nke ikuku ụwa
1.1 Mmiri uzuoku
1.4 Ragba ogwu Aerosol
2 N'ígwé nke'swa ikuku
3 Ikuku na okpomoku zuru uwa
Ngwurugwu nke ikuku nke ikuku ejiriwo nwayọọ nwayọọ gbanwee kemgbe ọtụtụ nde afọ ka ọdịdị ala ụwa malitere. Ka ọ dị ugbu a, ikuku atọ, nitrogen, oxygen na argon, bụ 99,95% nke oke ikuku; ndị a, nitrogen na argon bụ geochemically inert na ozugbo tọhapụrụ ha na mbara igwe ha na-anọgide n'ebe ahụ; oxygen, n'aka nke ọzọ, na-arụsi ọrụ ike na a na-ekpebi ọnụọgụ ya site na ọsọ nke mmeghachi omume nke na-ejikọta nkwụnye ego nke ikuku oxygen na nkwụnye ego na-ebelata nke dị na nkume sedimentary.
Ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ dị n'ikuku nọ n'obere ntakịrị nke na a na-egosipụtakarị uche ha na akụkụ kwa nde site na olu. Ha bụ ndị a:
Mmiri uzuoku: 18
Ikuku ndị a na-apụta n'ike n'ike ruo mgbe ọ bụla dị nso na 80 km, ọ bụ ya mere eji akpọ ha. Agbanyeghị, ọrụ dị oke mkpa na ihu igwe na-adaba na gas na-agbanwe agbanwe, ọkachasị vepo mmiri, carbon dioxide, ozone na aerosol.
Alụlụụ mmiri bụ ikuku na-apụta mgbe mmiri si na mmiri mmiri banye na gas. Ọ bụ mmalite nke ọtụtụ usoro nhazi ihu igwe, onye na-ebugharị ọkụ na-arụ ọrụ ọkụ na njikwa ọkụ.
Ọ bụ gas na-enweghị ntụ, nke na-enweghị isi nke dị mkpa maka ịdị ndụ n'ụwa, ebe ọ bụ na ọ bụ ya kpatara ọrụ a na-akpọ uto griin haus. Ka ọ dị ugbu a, mmụba nke anwuru nke gas a na-ebute mmụba na okpomọkụ.
Nke a bụ sọsọ ikuku nke ikuku absorbs fọrọ nke nta niile anyanwụ ultraviolet radieshon ya mere bụ envelopu nchekwa nke na-enweghị ebibi ndụ n'ụwa.
Ragba ogwu Aerosol
Ha nwere mmetụta dị ukwuu na nghọta nke ikuku ma rụọ ọrụ ndị dị oke mkpa maka ihu igwe, n'ụzọ bụ isi site na ịme odide nuclei nke sitere n'igwe ojii na nkịta ọhịa, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ha bụ ihe kpatara oke mmetọ ikuku mgbe ikuku ha dị elu.
N'ígwé nke'swa ikuku
E kewaala mbara ụwa n’elu ụzọ ise. Ọ bụ denser n'elu, ma njupụta ya na-ebelata na ịdị elu ruo mgbe ọ ga-emesị jupụta na mbara igwe.
Ebe anakpo: Ọ bụ nke mbụ oyi akwa na ọ bụ ebe anyị hụrụ onwe anyị. Ọ bụkwa ebe ihu igwe dị. Ọ dị na ọkwa ala ruo 10km nke elu.
Osimiri: Y’oburu n’ichoo ugbo elu ugbo elu, ị meela ya ebe a. A ga-ahụkwa oyi akwa ozone na oyi akwa a. Ọ dị n'etiti 10km na 50km na elu.
Ahịa: nke bu ebe anakpo “meteorites” ma bibie ya. Ọ dị n'etiti 50 na 80km nke elu.
Okirikiri: ebe a na-enwupụta ọmarịcha ọkụ ugwu. Ọ bụkwa ebe mbara igwe na-agba. Ọ dị n'etiti 80 na 500km nke elu.
Okirikiri: nke bụ na oyi akwa na dịkarịsịrị ntakịrị ma mechaa jikọta ya na oghere dị n’elu. Ọ dị n'etiti 500 na 10.000 kilomita nke ịdị elu ihe dịka.
Ikuku na okpomoku zuru uwa
Kemgbe mgbanwe ọchịchị obodo, mmadụ na-arịwanye elu na-emepụta ikuku gas na ihe ndị ọzọ na-emetọ ikuku, nke butere ọnọdụ okpomọkụ ụwa dum ịrị elu 0'6ºC. O nwere ike iyi obere, mana nke bụ eziokwu bụ na o zuru ezu iji guzobe ike nke ihu igwe na-esikwu ike, ma ọ bụ oke ifufe, oke mmiri ozuzo ma ọ bụ mmiri ozuzo.
Mana gịnị kpatara mmụba a nke enweghị ka ọ na-emetụta ndụ dị n'ụwa? Okpomoku di n’uwa dum na-eme ka oke osimiri kpoo oku, ma ugbu a, acidite di. Oké osimiri dị ọkụ karị ‘pụrụ inye’ oké ifufe na-emebi ihe. Ọzọkwa, ice na mpaghara polar na-agbaze. Akpụrụ ahụ na-agbaze ga-aga ebe ọ bụla, ma ọ ga-aga n'oké osimiri, na-akpata mmụba n'ọkwa ya.
Ọ gwụla ma e mere usoro iji belata ikuku na-emetọ ikuku, ka na njedebe nke narị afọ, okpomọkụ nwere ike ịrị elu ogo 2, Dị ka opekempe.
Yabụ, anyị nwere olile anya na ọ baara gị uru na ọ ga-adịrị gị mfe site ugbu a gaba ịmata ọkwa dị iche iche, yana ngwakọta nke ikuku ụwa na ọrụ dị mkpa ha na-arụ maka ndụ na obere mbara igwe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ngwakọta nke ikuku ụwa
kedu ihe mejupụtara ikuku ụwa
Ọ bụ ihe ịtụnanya ịmata ihe mejupụtara nke ikuku, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ n'ezie ka "uzommeputa" zuru oke maka gas ndị na-eme ka ndụ dịrị n'ụwa ga-ekwe omume site na ọgụgụ isi kachasị elu
Ihe a ga-atụle na akụkụ kwa nde, nke na-abụghị ihe kachasị mkpa gas ndị a (Radon dị n'elu CO2, n'etiti ndị ọzọ), B doesGH does chọpụta mgbanwe ihu igwe. Ndị a bụ usoro sitere n'okike nke ụwa nke nwere oge okirikiri karịa nke na-eme.
Kedu usoro nke CO2 si arụ ọrụ griin haus?
Zaghachi Roberto Codó Isus